नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यालय चितवनमा ५० लाख हिनामिना | Nepal's No.1 Co-operative News Portal
Home सहकारी खबर [Coop News] नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यालय चितवनमा ५० लाख हिनामिना
Rajendra Timsina says:
manager vae vandaima sanstha nitanta afno byaktigat jasto thanne prabriti le garda yesta ghatana haru hune garxan
Rameshkumar Adhikari says:
लुखा बरवाद पो गरेछ । यहां किन यस्तो भयो ? के नेफ्स्कुनमा दक्ष संचालक छैनन् ? कि दक्ष व्यवस्थापन छैन ? दुवै छ भने किन घोटला भयो ? यस्तो घट्नाले स‌स्थाको हिंसा र सदस्यको लागी विश्वासघात हुने छ । यस्तो प्रश्न मलाई एक जना सहकारि कर्मि साथीले सोध्नु भयो ।
मैले जवाफमा भने यहां किन यस्तो भयो ? तपाईको विचारमा के लाग्छ ? भनेर पुन उनैलाई सोधें । उनिले भने
वित्तीय कारोवार गर्ने स‌स्थामा निश्चित समयमा कर्मचारी सरुवा गरि फेरवदल गर्नु पर्दछ भन्ने पनि हेका राखिएन, ऋण पास गर्दा समितिले निम्नतम प्रक्रियागत कुरा पुरा नहुनु जस्तो (सामान्य फोन सम्पर्क नगर्नु), फारम फर्मेटमा क्रसचेक गर्न सकिने ढांचा नहुनु, हाम्रा केहि तेस क्षेत्र हेर्ने स‌चालक साथीहरु र कर्मचारी व्यवस्थापनका उच्च अोदाहाका साथिहरुले कामलाई भन्दा तल्लो अोदाहाका साथीहरुको विश्वास गर्नु, (गुलामी चक्र पध्दतिमा स‌स्थागत विकास हुनु), अान्तरिक लेँखा परिक्षण विभागमा दक्ष कर्मचारी नहुनु वा त्यस्तो विभागको व्यवस्था नहुनु, जिम्मेदार स‌चालकहरुमा परिक्षणको प्राविधिक योग्यता नहुनु, कर्मचारीलाई उचित तालिमको व्यवस्था नहुंदा पेशागत अनुसासनमा कमिहुनु अादि कुराले यस्तो घट्ना भएको हुन सक्छ ।